Ukuba brand like Scott ibhayisikili nomkhiqizi kwadingeka e maphakathi nawo-1980. Ngenkathi onjiniyela nabaqambi inkampani wayevele isitolo umxhwele ulwazi ngalokho bungatholakala esebenzisa ngesivinini, ukuthembeka nokuphepha ukuthuthukiswa kwezemidlalo imishini, amathuluzi nezinto zokuhlobisa. Kuyo yonke le minyaka nomkhiqizi uye wabonisa ngokuphindaphindiwe ukuphumelela ubuchwepheshe eliyingqayizivele eyasungulwa lalo. Lona omunye umehluko eziningi, okuyizinto idume Scott emabhayisikili ezinguqulweni ezahlukene. Uma omunye abameleli bokuqala sha yabonisa ekwazi ukumelana namandla omoya ngcono phakathi izimbangi, uhlelo wanamuhla ikhefi kancane njalo kude izimbangi zakhe ngokuya ezihlukahlukene izici.
Umenzi unaka ngokukhethekile ukuba lo mugqa amabhayisikili njengoba onobuhle ezisezintabeni olindele kunazo futhi waba nokwethenjelwa, futhi ukusebenza. Ngeshwa, efana izimbangi amaningi, Scott Abaklami ukhokha ngamandla Bikes anjalo angaphezu ukunaka kungcono kunamanoni induduzo. Lena enye yezinhlobo ezingu bokwenza ezimbalwa zalezi onobuhle. Ngakho, uchungechunge ethandwa kakhulu entabeni izizinda kufanele abize Scott Voltage ibhayisikili nge namasondo angu 26 inch. Phakathi izici eziyinhloko uzinake ukwakhiwa aluminium, kwabhoboka disk uhlobo ukumiswa ekuphambukeni Hard umsila, kanye khona 24 ngesivinini. Model ziphoqa ikakhulukazi phakathi abalandeli kanzima abakwazisayo ke ngenxa yokuthi liyasiza futhi lula. By the way, isisindo mshini kg 14.2 kuphela, okusenza induduzo ekusingatheni lo ibhayisikili.
Eqenjini esifanayo ukunikeza uchungechunge Aspect. Letindlela zenzelwe unqamule izwe. Futhi wabeka isisekelo aluminium ingxubevange namandla high, umsebenzi enikeza disc amabhuleki kanye okufanayo ukwehla ipulaki uhlobo Hard umsila. Ngesikhathi ibhayisikili efanayo Scott Aspect has namasondo angu 27.5 intshi nesisindo 14.3 kg.
Ngokuvamile, kulesi sigaba emabhayisikili Kulinganiselwa zobuchwepheshe umkhiqizi ezingaba khona. Road Racing emabhayisikili kukhona kakhulu ngobuchwepheshe eziphambili, njengoba kufakazelwa izindleko zabo. Kulokhu sikhuluma omunye yimpumelelo kakhulu ukulungiswa umakhi - Addict 10. ERussia, Scott emabhayisikili ayatholakala ngentengo ruble ayizigidi 250 .. Iqiniso lokuthi leli imodeli Ingabizwa kufanele ngokuthi uchwepheshe. Ngaphezu kwalokho, emhlanganweni walo abathintekayo yezingxenye best ububanzi lobuchwepheshe ngebhayisikili umkhakha. Kuhle kokusho kuphela Continental brand amathayi eliphezulu ukubopha Shimano laseDura-Ace. Ngenxa yalokho, Addict has namasondo angu 28-inch, Dual Control system kanye cuffs ukuthi ikakhulukazi yabakhanga abalandeli imodeli - carbon uzimele.
Amabhayisikili zokushayela idolobha
Kulesi ulayini Kuyaphawuleka uchungechunge Sub Speed, eyenzelwe babuka. Kufanele ukuthi imodeli ihlanganisa imiqondo emibili: ingxenye - orientation nokuqokwa umgwaqo omkhulu wesi- kanye nokugqugquzela wenduduzo. Konke lokhu kusekelwa ezingeni lelisetulu ukuphepha kanye ukuthembeka umklamo, okuyinto ifakwe le ibhayisikili Scott. Intengo ngenhlanhla kuqinisekisa sina ukutshalwa kwezimali kule imodeli - eRussia ngicela okuyisilinganiso sabangu-ruble ayizigidi 70 .. Yini ithola umnikazi leli nani? ikhithi Kuhle kakhulu ehlanganisa isakhiwo esenziwe aluminium ingxubevange, namasondo angu 28 intshi ( "Continental" isondo) kusukela ukubopha Shimano, ibhande drive 8 nesivinini izindlela. Lokhu kuphumela umklamo eyizingqabavu ngemisebenzi emihle futhi yini ephawulekayo kuleli imodeli, isisindo salo sikhulu kg 11.8 kuphela.
Wezingane kanye imodeli eyeve eshumini nambili
Umkhiqizi futhi kabanzi izinguqulo onobuhle eyisisekelo, eyenzelwe izingane nentsha. Kahle kahle, lokhu ukuguqulwa Junior uchungechunge Scale, Voltage nabanye. Kulesi ibanga lobudala kuyinto ngempela ebanzi. ubuncane beminyaka - 3-4 iminyaka, okungukuthi, kukhona izinguqulo nge amasondo eseceleni. Ubukhulu isondo ngesikhathi esifanayo kuhluka amayintshi 10 kuya 24, ukuvumela ukuba ukhethe best intsha nezingane ezincane. Ngokuya ukusebenza onobuhle eyeve eshumini nambili ikakhulukazi eduze nozakwabo omdala. Ngokwesibonelo, Scott emabhayisikili we zezingane uchungechunge Scale isebangeni nentaba. Babuye libhekene khona anhlobonhlobo ngesivinini (angaphezu kuka-20), khona ngekuhamba plugs kanye aluminium ingxubevange design okuhlala. Ngesikhathi esifanayo, amamodeli abe nesisindo esincane 11-12 kg, futhi amabhuleki abo ethulwa usebe izindlela.
Uchungechunge ngalunye unendlela yawo izici, emihle nemibi, kodwa ngokuvamile sha Scott kunikeza isithombe esihle. Phakathi zako emabhayisikili kusukela kule nomkhiqizi kuzomele sifake isisindo nesizotha, amandla kwesakhiwo, undemanding yesondlo kanye isevisi eside ekuphileni izingxenye. Futhi nabagibeli abanolwazi ukugcizelela ongakhetha yokuthuthukisa olubanzi anawo amabhayisikili Scott ngesikhathi. Ukubuyekeza, isibonelo, ngokuvamile aqukethe amathiphu nge izincomo esikhundleni akusebenzi disc ukunqanda yesimanje analogue. Nokho, uhla izinkampani ezingeni phezulu siqukethe cishe zonke emabhayisikili ne disc amabhuleki kakade imishini eyisisekelo. Uma sikhuluma amaphutha, bona ikakhulukazi ezihlobana Ergonomics futhi zibiza. Ngo onobuhle eyenzelwe inkonzo kakhulu nokukhuthazela, isibonelo, akusiyo ezingeni eliphezulu wenduduzo. Izinga intengo unqambothi Scott onobuhle kwezinye izimo, ewaphula wonke amarekhodi kusukela mncintiswano.
Namanje ukuqhathanisa owomileyo ube yiziphethu izici eziyisisekelo nenkambiso ehlukile kwezinye abakhiqizi esimweni Scott akuyona imikhiqizo efanelekayo. Iqiniso lokuthi kusukela ekuqaleni khona inkampani wenze ukubheja ngempumelelo zobuchwepheshe, ngezinye izikhathi ezihamba umkhakha wonke ezemidlalo phambili. Nale agxila kuyo, futhi kufanele kubhekwe amabhayisikili Scott owayejwayele khombisa Ubuchwepheshe emhlabeni wamabhayisikili.
Ungakhohlwa ukuthi womkhiqizo uyabandakanyeka ukuthuthukiswa izesekeli imishini izimoto kanye nezemidlalo ebusika. Ngokuvamile amakhambi ezobuchwepheshe adluliselwe komunye ingxenye kuya komunye, andisa ukusebenza imikhiqizo. Ngakho, ngo-womshini amabhayisikili izixazululo kwesakhiwo ziye lwenteke uyokuqinisa ngesisekelo luhlaka, ukwenza ekwazi ukumelana namandla omoya iyashelela futhi ngaleyo ndlela nokwandisa isisindo ingqikithi libhayisikili.
Ukuzingela isibhamu TOZ-120: izici kanye nokubuyekeza
Uchungechunge oluthi "izimpi unondindwa": abalingisi, izindima, sakhiwo isifinyezo
Geforce GTX 550 TI: ihluzo amakhadi sici
Amakhowe shlyapochnye. Indlela ukuze adle amanita?
I-Wwatchwatch ye-Wristwatch yamadoda. Umlando weBrithani, amamodeli athandwayo nokubukwa kwamakhasimende
Ngubani amaphiva? Lonke iqiniso eliphathelene isilo emangalisayo